Coinbase baadhayaa ETF Seeraar oo gargaar ka Blackrock
Coinbase ayaa doonaya in la abuuro wax soo saarka sarrifka-baayacmushtari ah ku xidhan crypto, sida laga soo xigtay dadka yaqaana arrinta, si ay u oggolaadaan in maal-tafaariiqda inay helaan suuqa kacsan. Toddobaadyadii la soo dhaafey shirkadda ayaa la sheekaysiga xubnaha kooxda shaqada blockchain BlackRock ee ka jaftaa khibradda shirkadda ayaa la bilaabay waxyaabaha sarrifka-baayacmushtari.
Coinbase ayaa ku dhawaaqay fund index ah, 6 bilood ka hor, of cryptocurrencies loogu talagalay maal la aqoonsan yahay. ETF ah, si kastaba ha ahaatee, waxaa ku jahaysan maal caadiga more. Haddii Coinbase ahaayeen si ay u horumariyaan ETF crypto a, in ay ku biirtay dhawr shirkadood oo kale ayaa sidoo kale isha ku heysa inay bilaabi iyaga u gaar ah, ay ka mid yihiin soo horjeeda Gemini, Bitwise Hantida Management, iyo VanEck.
magaalada Chinese isticmaalaa blockchain si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa dembiilayaasha on daynta sharafeed
Lagu xukumay on sii-daynta sharafeed ee magaalada koonfurta Shiinaha ee Zhongshan hadda wuxuu heli naftooda u xiiseeyaan karaa network blockchain a. waaxda cadaalada ee Zhongshan sheegtay in ay bilowday nidaamka blockchain ku salaysan si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa hore ee maxaabiista si loo hagaajiyo tayada wax-u “saxo bulshada.”
Parolees waxaa looga baahan yahay in ay ku hubiso iyo dhamaystiraan waajibaadka maalin kasta oon ku bixinaya xogta kor-to-date on dhaqdhaqaaqa dembiile kasta, si ay shaqaalaha iyo hagaajinta bulshada iyo hay'adaha sharci fulinta ku habboon laga siiyo helitaanka shabakadda waa in ay ogaadaan halka dembiile ah ee mar kasta awood u, oo sidaas qaadan kartaa tallaabooyinka lagama maarmaanka ah haddii mid la jabiyay ka joogtada ah ee loo baahan yahay. waaxda cadaalada ayaa sheegay in technology waa inay awoodaan inay yareeyaan rar shaqaale in dhaqan ahaan looga baahan yahay inay jidh ahaan raaci parolees markii hubinta ay adeecida sharciyada iyo fulinta adeegga bulshada.
High Times aqbala Seeraar ay IPO
daabacaadda cannabis High Times waxaa aqbalay cryptocurrency ay qurbaan dadweynaha bilowga socda (IPO). Wakiilka Sare Times Jon Cappetta xaqiijiyay in shirkadda la Seeraar aqbalin sida xulashada lacag. Cappetta sheegay in xereynta sharci (oo muujinaysa haddii kale) waxaa laga dhigay “si ay u sameeyaan SEC ku faraxsanahay.”
Waa xusid mudan in Fund America loo isticmaalo in lagu badalo isla crypto galay doollarka Maraykanka. Times Sare’ IPO laftiisa si fiican u socdaan, ayaa sheegay in cap, iyo shirkadda la eegaya liiska toos ah iyada oo sababtu tahay. “Regulation A The [ururinta] waxaa laga sugayaa in ay xirto on 12 ka bishaan, ka dibna waxaa laga waxaan bilaabi doonaa habka taxay” ayuu yidhi.
Report Kraken Daily Market for 05.09.2018
$172M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
Inkastoo Seeraar, Ethereum and...